अनेसास बेलायत च्याप्टरको अध्यक्षमा पुनः सुमलकुमार गुरुङ | We Nepali
नेपालको समय: ०२:०२ | UK Time: 21:17
अनेसास बेलायत च्याप्टरको अध्यक्षमा पुनः सुमलकुमार गुरुङ
२०७५ असार १९ गते ०:५८
लन्डन । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेलायत च्याप्टरको वार्षिक साधारण सभा तथा छैठौं अधिवेशनले सुमलकुमार गुरुङलाई पुनः सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ ।
११ सदस्यीय कार्यकारी समितिको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी राई (लारा), महासचिव सन्तोष कार्की, सचिव रेखा खरेल, कोषाध्यक्षमा सचिन गुरुङ चयन भएका छन् । त्यसैगरि, सदस्यहरूमा लिला गुरुङ, मन्जु भण्डारी, मोहन आचार्य, माया गुरुङ, सारादेवी गुरुङ, विसन थापा र दुर्गा थापा चयन भए ।
नयां कार्यकारी समितिले छलफल गरि सल्लाहकारमा डा. रुपक श्रेष्ठ र डा. सुनिल बुढाथोकीलाई चयन गरेको छ ।
पांचौ कार्यकारी समितिको विघटन विधिपूर्वक घोषणा गरेर निर्वाचन आयुक्त डा. सुनिल बुढाथोकीलाई नयां कार्यसमिति चयनका लागि आग्रह गरिएको थियो । हलमा सदस्यहरुको सहभागितालाई मध्यनजर गरी निर्वाचन आयुक्त डा. सुनील बुढाथोकीले उपस्थित सदस्यहरुसंग छलफल गरेका थिए । उम्मेदवारहरुबाट निवेदन प्राप्त भएपछि साविककै कार्यसमितिलाई अर्को थप एक कार्यकालका लागि चयन गरिएको हो ।
त्यसैदिन नव निर्वाचित कार्यसमितिले विभिन्न भावी कार्यक्रम तय गरेको छ ।
१८ नर्थफाक, वेलिङ, केन्टमा सम्पन्न अधिवेशन संस्थाका अध्यक्ष सुमलकुमार गुरुङको अध्यक्षता र सल्लाहकार तथा अनेसास केन्द्रीय उपाध्यक्ष (युरोप) डा. रुपक श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो ।
कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सम्पन्न हुनु अघि सदस्यता नवीकरण र नयां सदस्यहरुको दर्ता गरिएको थियो । संस्थाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी राई (लारा) ले सबैलाई स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गरेकी थिइन् । अधिवेशनले महासचिव सन्तोष कार्कीको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको आयव्यव विवरण सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
अधिवेशन सम्वोधनका क्रममा संस्थाका सल्लाहकार अनेसास केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. रुपक श्रेष्ठले अनेसास बेलायत च्याप्टरको विगत देखि वर्तमानसम्मका क्रियाकलाप र प्रगतिबारे संक्षिप्त जानकारी दिए । अध्यक्ष सुमलकुमार गुरुङले सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अनेसासको आगामी कार्यकारी समिति चयन, यसवर्षको भानु जयन्ती र सुप्रमा पुरस्कारबारे प्रकाश पारेका थिए ।